i-South Africa ibheke ukubuyela isimweni emuva kokuyiqala kabi i-tri-series
TAUNTON, ENGLAND - JUNE 20: Sarah Taylor of England looks on as Mignon Du Preez of South Africa scores runs during the International T20 Tri-Series match between England Women and South Africa Women at The Cooper Associates County Ground on June 20, 2018 in Taunton, England. (Photo by Julian Herbert/Getty Images)
Ama-Momentum Proteas alungele ukubuya emuva kokuqala kabi kumqhudelwano wabo we-Women’s T20 Tri-Series bedlala ne-New Zealand ne-England e-Somerset.
Ama-South Africans ahlulwa kanzima ngama-runs angu-66 no-121 kwi-T20I double-header yabo yokuqala nqa, kwasala amarekhodi aphukile. Ingxenye yawo kwaba umphumela omkhulu weqembu kuma-women’s international T20s (216/1) okuhlanganiswe ama-White Ferns, ngaphambi kokuthi kuphulwe iqembu lasekhaya kumdlalo wesibili osukwini, njengoba behlanganise u-250/3 ekupheleni kwama-overs abo, baphula irekhodi labesilisa u-230/8 le-England men, elahlelwa kudlalwa ne-South Africa kwi-2016 men’s World T20.
u-Mignon du Preez ukuchaze njengolulodwa losuku olubi emsebenzini, kodwa uyakholwa ukuthi bangayishintsha inhlanhla yabo kumdlalo wabo olandelayo bedlala neqembu lasekhaya enkundleni efanayo ngoMgqibelo.
“Bekunzima ukudlala ama-internationals amabili osukwini olulodwa, ikakhulukazi ama-T20, umdlalo onamandla,” esho ephawula. “Ngicabanga ukuthi kuyakhandlana emoyeni nasemzimbeni, kodwa kuningi okungafundwa esingakuthathu kwimidlalo edlulile. Kuyacaca ukuthi bekungelona usuku oluhle emsebenzini kodwa akuyona indlela esiqala ngayo kodwa indlela esiqeda ngayo ebalulekile.”
i-South Africa ishodile kuzona zontathu izigaba zomdlalo, ukuvimba kushayeke kakhulu ngesikhathi umdlali we-New Zealand u-Suzie Bates (124*) ehlasela no-Tammy Beaumont (116) we-England, bobabili bashaye amakhulu okuqala osukwini. u-Du Preez uthe ufuna ukubona ukulungiswa okukhulu kuzona zonke izigaba zeqembu, ikakhulukazi ngasekuvimbeni, okunekhono lokushintsha ukuhamba komdlalo uma kwenziwe kahle.
“Kubhekwa emuva kwimidlalo, kunezindawo esifuna ukwenza kangcono kuzona. Sibe nomhlangano omuhle lapho esikhulume khona ngezindawo esingenza kangcono kuzona, ikakhulukazi ukuvimba njengendawo esiziphoxile kuyo,” esho eqhubeka. “Sakhe amathuba futhi kumdlalo omfushane kumele uthathe amathuba angu-50-50 lapho, uma singaba nethuba elihle kakhulu, singawushintsha umdlandla uhambelane nathi.”
Umehluko owodwa omkhulu phakathi kwamaqembu amabili anqobile nokushaya kwe-South Africa kube uhlobo abaludlalile. u-Du Preez ubone ukulwa kulaba akade bedlala nabo iqembu lakhe elingakwazanga ukulingisela. Uthe lokhu kuzomele kushintshe uma ama-Proteas engafuni ukusala emuva emhlabeni, ikakhulukazi kuyela kwi-ICC Women’s World T20 e-Caribbean ngo-November.
“Ukubuka ukuthi amanye amaqembu (i-England ne-New Zealand) badlale kanjani, badlale ikhilikithi ehlaselayo futhi sathi sifuna ukudlala kanjalo kodwa asikakwenzi lokho okwamanje. Mhlawumbe asikayishintshi imigqondo siyisuse kuma-ODI iye kuma-T20 njengoba kwenzebona noma ngokushesha njengoba besifuna,” esho. “Ngisakholwa ukuthi singafunda kulokhu osekwenzekile futhi sibengcono kusukela manje kuyele phambili.”
“Kuvulana amehlo,” esho eqhubeka. “Sibonile ukuthi umdlalo ukhule kakhulu futhi usudlulele phambili ngokushesha futhi kumele sikhethe ukuthi sifuna ukubafica sidlale ikhilikithi efanayo noma kuzosijabulisa ukusala emuva. Emuva kwezinkulumo izolo ngingasho ukuthi iqembu libheke ukubheka phambili nokuthi sibalwa njengengxenye yamaqembu aphambili kuma-T20 emhlabeni. Sinawowonke amakhono emhlabeni, ukuqiniseka ukuthi sikhipha okuhle kubona bonke abadlali osukwini futhi sidlale kangcono kunangoLwesithathu.”
Kubhekwe uMgqibelo, kuningi okungamele kushintshe esikhathini esincane kwi-South Africa, kodwa lo owayengukapteni ukholwa ukuthi iqembu linakho lokhu okudingekayo ukuthola abakufisayo, ushintsho olukhulu okumele lenzeke ukuthemba amakhono abo kanye nokudlala umdlalo wabo bengasabi.
“Kumele sibuyise lolokholo, lento ethi siyazi ukuthi singakwenza lokhu,” kusho u-Du Preez. “Sengakubona emaqenjini amaningi esadlala nawo. Bazithemba 100 percent futhi ngaphandle kokusaba futhi yilokho okumele sikwenze.”
“Okuzogxilwa kukho ukudlala ikhilikithi enamandla futhi kuhlaselwa, kumele sidlale ikhilikithi enhle futhi uma sikwenza kahle lokho, umdlalo uzoba ngakithi. Yilokho bona (i-New Zealand ne-England) abakwenze kahle, bahlasela abasiphoselayo futhi njengabashayayo, sifuna ukwenza okufanayo kanye nokufaka esidlala nabo ngaphansi kwencindezi.”
NgoMgqibelo i-England izodlala i-double-header lapho izobhekana khona ne-South Africa kuqala ngo-13:00 (14:00 CAT), kulandele i-New Zealand.
Ikhulu la-Beaumont lihlela ukunqoba okuphule irekhodi kwi-England kwi-T20I yesibili i-South Africa iqonde ukusebenzisa izifundo kwi-T20 tri-series u-Kapp ucela ukukholwa njengoba i-South Africa ibheke ukunqoba umlando ngokunqoba u-Van Niekerk ocikekile ubheka ukuhlula i-England kumdlalo ocacisa nge-series Amakhulu ka-Taylor no-Beaumont asize i-England ilinganise i-series Moreeng praises Proteas women but wary of ‘wounded’ England as they look to clinch the series Ama-Proteas women angaphambili ngo-1-0 e-England Ama-Proteas women alungele inselelo enkulu ne-England u-Van Niekerk umangazwe ukuthola umklomelo omkhulu, wathi uyinikela eqenjini lakhe Ama-Proteas Women alindele ithuba lokubhekana ne-England futhi i-CSA imemezela iqembu lama-Proteas Women elizoya e-England